ကောင်းသောဧကရာဇ် Nerva - Marcus Cocceius Nerva
Marcus Cocceius Nerva အုပ်ချုပ် ရောမမြို့ ဟာသိပ်မုန်း၏ဧကရာဇ် Domitian ၏လုပ်ကြံခံရသည်အောက်ပါ, 96-98 အေဒီကနေဧကရာဇ်အဖြစ်။ Nerva က "ငါးကောင်းသောဧကရာဇ်" ၏ပထမဦးဆုံးနှင့်သူ၏ဇီဝမိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့တဲ့သူအမွေခံမွေးစားရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ Nerva မိမိသားမရှိဘဲ Flavians ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူရစေီးရလောမွောငျးတည်ဆောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး system ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အစားအစာပေးဝေရေးတိုးတက်စေရန်စပါးကျီတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Nerva နိုဝင်ဘာလ 8 မွေးဖွားခဲ့သည်, သူ့မိသားစု 30. အေဒီ Umbria အတွက် Narnia ကနေဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့အဖိုး Nerva အောက်မှာကောင်စစ်ဝန်ခဲ့ တိဗေရိ ။ မယ်တော် Sergia Plautilla ဖြစ်ခဲ့သည်။
Nerva augur ခဲ့ Augustalis (ထို deified ဩဂုတ်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်), တစ်ဦး Palatine salius (အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ခုန်ယဇ်ပုရောဟိတ်) နှင့်တစ်ဦး quaestor sodalis ။ သူကနီရိုမှ Piso များ၏ပူးပေါင်းကြံစည်မှုထုတ်ဖော်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်သောအခါသူ 65 ခုနှစ်ကဲဒီဇိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ 71 ခုနှစ်, Nerva Domitian အတူ 90 ခုနှစ်ထို့နောက်ဧကရာဇ် Vespasian အတူ consulship ကျင်းပ၏။ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် Nerva Domitian နှင့်အတူမျက်နှာသာထဲကကျဆင်းခဲ့သည်။ Philostratus သူ Tarentum မှနှင်ထုတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
Nerva ဧကရာဇ်ဖြစ်လာခဲ့သည်တဲ့အခါမှာသူကလွှတ်တော်အမတ်များက execute ဖို့မကျိန်ဆို, သူကနိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုအဘို့အ Domitian အောက်မှာထောင်ကျခဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေး; သူကနိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုနှင့်အတူမိမိသခင်အားသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဂျူးလူနေမှုပုံစံစတဲ့ချမှတ်မှကျွန်နှင့် freedmen တားမြစ်သည်။ အတော်များများကသတင်းပေးကွပ်မျက်ခံရခဲ့ကြသည်။ Nerva တခြားနေရာရွှေနှင့်ငွေကို အသုံးပြု. Domitian ရဲ့မုတ်ခြင်းနှင့်ရုပ်ပွားတော်ဖျက်ဆီးတော်မူ၏။
အဆိုပါ praetorian ကိုယ်ရံတော် Domitian ၏လုပ်ကြံခံရသဖြင့်စိတ်ဆိုးခဲ့ Nerva သူတို့ကိုရန်လုပ်ကြံလက်နက်ချကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။
အင်ပါယာဒုက္ခ၌ရှိ၏, ဒါပေမယ့် Pannonia အတွက်ဂျာမန်အုပ်စိုးအောင်ပွဲ၏အချိန်မီသတင်းရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ Nerva အဆိုပါ Trajan ၏အောင်ပွဲနှင့်သူအမွေဆက်ခံသူအဖြစ် Trajan ချမှတ်ခံခဲ့ရကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးကြေညာခဲ့သည်။ Nerva သူသစ်ကိုကဲသာဘုရငျခဲ့သူ့ကိုပြောပြ Trajan မှရေးသားခဲ့သည်။ Trajan ပထမဦးဆုံး Non-အီတလီဧကရာဇ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဇန်နဝါရီလ 98 ခုနှစ်တွင် Nerva လေဖြတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကသုံးပတ်အကြာမှာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Trajan, သူ့ဆက်ခံ Nerva ရဲ့ပြာကိုဩဂုတ်၏ဂူဗိမာန်၌ထားနှင့်သူ့ကို deify ဖို့ဆီးနိတ်လွှတ်တော်ဟုမေးခဲ့သည်။
DIR - Nerva
ဥရောပသမဂ္ဂ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ - တစ်ဦးက Timeline ကို
အဆိုပါ Visigoths ဘယ်သူကသလော
Genghis Khan ကပြကွက်ဓာတ်ပုံများ
Braconid WASP ဘာတွေလဲ?
ကြီး 12 ညီလာခံသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် SAT ရမှတ်များ
Alabama တှငျလှေစီးနေသည်, နူးလှေလှော်ကစားနည်းများနှင့်အပျော်ဖောင်စီးခြင်း
အဘယ်သူသည် "အမေရိကတိုက်တင့်တယ်" ရေးသားခဲ့သူ?
အကောင်းဆုံးစာအုပ်များ: Waterloo ၏တိုက်ပွဲ
ဘော်စတွန်အသတ်ခံရမှုသူရဲကောင်းရိပ်ပု Attucks ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အလင်းပြန်မှု Daily သတင်းစာကျိန် ဆို. ပူဇော်
သတ္တု: အခြေခံသတ္တုများ Element ကို Group ၏ Properties ကို
ဘယ်လိုဖေဖော်ဝါရီလ၏တစ်လတွင်၎င်း၏အမည် Get ခဲ့သလား
အကောင်းဆုံး Animated သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်ဘာတွေလဲ?